China SEBIC 20 inch Motorized Fat tire 500w Electric Bike Motorcycle fekitari uye vagadziri | Kusekerera
SEBIC 20 inch Inotyaira Mafuta tai 500w Magetsi Bike Mudhudhudhu
Kuchengetedza kwakaderera uye kutaridzika kupfupi. Uye iyo bhasikoro remagetsi rakavakwa zvakanaka neiyo yakasimba uye yakasimba dura uye furemu, inogona kutsigira max huremu hwe100KG. Kumberi & mbiri yekumashure yakatungamira mwenje uye yakakwira dziviriro isina mvura inovimbisa kuve chero mamiriro.
Mvura 351 - 500w
Saizi ye Wheel 20 ″
Motokari Brushless, Mag vhiri 500W / 750W
Chimiro 20 * 490MM, Aluminum chiwanikwa
Forogo 20, chiwanikwa Fork, kuturika
Akaputsa Double Disc akamedura
Tire 20 * 4.0
Gear Set imwe chete kumhanya
Bhatiri Lithium Bhatiri 48V
Ratidza LCD Ratidza
GARA UINE SIMBA, GARA UCHITonhora- Yakabatanidzwa Wheel dhizaini iyo yakaderera kugadzirisa uye kupfupisa chitarisiko. Uye iyo bhasikoro remagetsi rakavakwa zvakanaka neiyo yakasimba uye yakasimba dura uye furemu, inogona kutsigira max huremu hwe100KG. Kumberi & mbiri yekumashure yakatungamira mwenje uye yakakwira dziviriro isina mvura inovimbisa kuve chero mamiriro.
KUSVIRA & FAST- 500W-1200W yakarongwa magetsi mota inobvumira iyo kumhanya nekukwira zvakanaka. Iyo 48V 17.5Ah Li-ion bhatiri inopa max kumhanya kwe 21 MPH uye max cruising chinhambwe kusvika pamakumi mashanu mamaira mushure meimwe yakazara yakazara kuchaja.
KUNYARADZA & Kachengeteka- Peya ye hydraulic disc mabhureki ane akacheka-akachekwa anodzorwa nemaoko levers anononoka kana kukumisa chero nguva, uine chigaro chikuru chakasununguka, kumberi & kumashure kuzere kushamiswa kwekumwa, yakasimba kumberi foloko kumiswa, yakafara uye inorwisa-kurova 20 × 4.0 inch matai anopa yakasimba kudhonza uye kugadzikana, iwo mafambiro ari maviri akasununguka uye anonakidza. Pamberi Mwenje inotonhorera uye yakakwirira lux, Rear Brake mwenje kukuita iwe kutasva zvakanyanya kuchengeteka.
KUSIMBISA ZVINHU ZVINOGONESESWA - Kunze kwebhasikoro remagetsi, iwe unogona kusarudza kuwedzera inotakura kumashure iyo inogona kutora mukwende wako uye neshure tsoka bhodhi kuunza vanhu.
Pashure: Mutengo Wakaderera Mutengo Wakachipa Wemagetsi Bike - SEBIC enduro yepakati yakakwira mota mugwagwa ebikes - Funncycle
Zvadaro: SEBIC mudhudhudhu Nyowani Chimiro Central Kusimudzwa 16 Inch Inogadzikana Imwe Wheel Magetsi Bike
Cruiser Bhasikoro 26
Magetsi Bike Cruiser